“Manchester United waxay Libaax-badeedyo kale kula jirtaa badda iyagoo raadinaya Kalluunka ugu wayn” – Gary Neville – Gool FM
“Manchester United waxay Libaax-badeedyo kale kula jirtaa badda iyagoo raadinaya Kalluunka ugu wayn” – Gary Neville
Dajiye June 26, 2019
(Manchester) 26 Juunyo 2019. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa sheegay in maamulka Red Devils ay ku adkaan doonto inay heshiisyo waa weyn ka sameyso suuqan xagaaga, sababa la xiriira qiimaha oo aad u sareeya iyo kooxaha waaweyn oo si xoogan ugu mashquulsan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Gary Neville waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Way adag tahay in la sameeyo heshiis, qof walba wuu ogyahay in Manchester United ay dooneyso soo xero galinta ciyaartoy tayo sarre leh, qiimahana kor ayaa loos ii qaadayaa”.
“Maamulku waa inuu isku dayaa inuu ku qanciyo ciyaartoyda inay yimaadaan kooxda, ciyaartoyda si dhaqsi ah uma boodaan si ay heshiis ugu saxiixaan koox kasta, waxay sameeyaan baaritaan waxayna shaqo u diraan wakiiladooda”.
“Waxaan u maleynayaan in Ciyaartoyda ay sameynayaan ku dhawaad 50 kulan, kahor inta aysan la saxiixanin koox kasta”.
“Manchester United waxay libaax-badeedyo kale kula jirtaa badda iyagoo raadinaya kalluunka ugu weyn, kooxha oo dhan ayeey ku adag tahay inay saxiixyo sameeyaan maadaama ay wada doonayaan xiddigo isku mid ah, kooxaha oo dhan waxay doonayaan Harry Maguire cid kastana waxay rabtaa Christian Eriksen”.
Halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa hadalkiisa ku soo xiray:
“Manchester United waa inay qabataa shaqo badan si ay u hesho line-upka ay ugu dagaalami karto tartamada kala duwan ee xili ciyaareedka soo aadan, lakiin ma ahan kaliya inay keenaan ciyaartoy, balse waa inay sidoo kale fasaxaan xiddigo qaar ee ku sugan kooxda”.
Toni Kroos oo ka hadlay wararka xanta ah ee la xiriirinaya horyaalka Chinese Super League & xiliga uu iska casilayo kubadda cagta
Carlo Ancelotti oo ku hanjabay inuu ka tagayo Napoli haddii Kalidou Koulibaly la iibiyo